Wararka - Waxsoosaarka caalamiga ah ee PMI wuxuu ahaa 57.1% bishii Abriil, isagoo soo afjaray laba koror oo isku xigta
Sida laga soo xigtay xogta ay soo saartay Xiriirka Saadka iyo Iibsiga Shiinaha ee 6th, wax soosaarka caalamiga ah ee PMI bishii Abriil wuxuu ahaa 57.1%, hoos udhaca boqolkiiba 0.7 ee bishii hore, taasoo soo afjaraysa isbeddelka labada bilood ah.
Isbedelka guud ayaa isbedelaya. Wax soosaarka caalamiga ah ee PMI ayaa hoos uga dhacay bishii hore, laakiin tusmada ayaa ka sarreysay 50% 10 bilood oo xiriir ah, waxayna ka sarreysay 57% labadii bilood ee la soo dhaafay. Waxay ku jirtay heer aad u sarreysa sanadihii la soo dhaafay, taasoo muujineysa in heerka kobaca wax soo saarka adduunka ee hadda jira Hase yeeshe, isbeddelka aasaasiga ah ee soo kabashada joogtada ah isma beddelin.
Xiriirka Sayniska iyo Iibsiga Shiinaha ayaa sheegay in bishii Abriil, IMF ay saadaalisay in kororka dhaqaalaha adduunka ee 2021 iyo 2022 uu noqon doono 6% iyo 4.4%, siday u kala horreeyaan, kuwaas oo ah 0.5 iyo 0.2 dhibco ka sarreeya saadaasha bisha Janaayo ee sannadkan. Dhiirrigalinta tallaalada iyo horumarka joogtada ah ee siyaasadaha soo kabashada dhaqaalaha ee dalal kala duwan ayaa ah tixraacyo muhiim u ah IMF si loo kordhiyo rajooyinka kobaca dhaqaalaha.
Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in weli ay jiraan isbeddelo ku saabsan soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Saameynta ugu weyn ee weli saameyneysa ayaa ah soo noqnoqashada cudurka. Xakamaynta wax ku oolka ah ee faafa wali waa shuruud u ah soo kabashada joogtada ah ee xasilloonida dhaqaalaha adduunka. Isla mar ahaantaana, halista sicir bararka iyo kor u qaadista deynta ee ay keeneen siyaasad debecsan oo lacag la’aan ah iyo ballaadhinta maaliyadeed ayaa sidoo kale isa soo taraya, oo noqonaya laba khataro waaweyn oo qarsoon oo ku jira geedi socodka soo kabashada dhaqaalaha adduunka.
Marka laga eego dhinaca gobolka, astaamaha soo socda ayaa la soo bandhigay:
Marka hore, heerka kobaca ee wax soo saarka warshadaha Afrika waxyar wuu gaabiyay, PMI-na waxyar ayuu hoos u dhacay. Bishii Abriil, waxsoosaarka Afrika PMI wuxuu ahaa 51.2%, hoos udhaca 0.4 boqolkiiba dhibcaha bishii hore. Heerka kobaca ee warshadaha wax soo saarka Afrika ayaa waxyar hoos uga dhacay bishii hore, isweydaarsiguna wali wuxuu ka sarreeyaa 51%, taasoo muujineysa in dhaqaalaha Afrika uu hayey isbeddel soo kabasho oo dhexdhexaad ah. Baahinta joogtada ah ee tallaalka oof-wareenka cusub, dardargelinta dhismaha aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, iyo adeegsiga ballaaran ee tikniyoolajiyadda casriga ah ayaa keenay taageero xoog leh soo kabashada dhaqaalaha Afrika. Hay'ado badan oo caalami ah ayaa saadaaliyay in dhaqaalaha wadamada Saxaraha ka hooseeya ee Afrika uu si tartiib tartiib ah u gali doono wadada soo kabashada. Arrinta ugu dambeysa ee "Wadnaha Afrika" ee uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa saadaalinaysa in kororka kororka dhaqaalaha ee dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika la filayo inuu gaaro 3.4% sanadka 2021. Sii wad inaad si firfircoon ula fal gasho horumarinta silsiladda warshadaha adduunka. iyo silsiladda qiimaha ayaa fure u ah soo kabashada joogtada ah ee Afrika.
Marka labaad, dib u soo kabashada wax soo saarka Aasiya waa mid deggan, PMI-du waxay la mid tahay bishii hore. Bishii Abriil, wax soo saarka Aasiya PMI wuxuu la mid ahaa bishii hore, wuxuu xasiliyey 52.6% laba bilood oo isku xigta iyo wixii ka sareeya 51% toddobo bilood oo isku xigta, taasoo muujinaysa in soo kabashada wax soo saarka Aasiya ay deggan tahay. Dhawaan, Shirka Sannadlaha ah ee Boao Forum ee Aasiya ayaa soo saaray warbixin ah in Aasiya ay noqon doonto mashiin muhiim u ah dib u soo kabashada adduunka, iyo heerka kobaca dhaqaalaha ayaa la filayaa inuu gaaro in ka badan 6.5%. Soo kabashada joogtada ah ee xasilloonida ee qaar ka mid ah dalalka soo koraya ee Shiinaha wakiil ka yahay waxay siisay taageero xoog leh soo kabashada joogtada ah ee dhaqaalaha Aasiya. Sii wadida sii xoogeysiga iskaashiga gobolka ee Aasiya ayaa sidoo kale dammaanad qaadaya xasilloonida silsiladda warshadaha Aasiya iyo silsiladda sahayda. Mustaqbalka dhow, sii xumaanshaha cudurrada faafa ee Japan iyo Hindiya waxaa laga yaabaa inay saameyn muddo gaaban ah ku yeeshaan dhaqaalaha Aasiya. Waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho faafitaanka, ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa ee labada dal.
Seddexaad, heerka kobaca ee warshadaha wax soo saarka Yurub ayaa sii waday inuu dardar geliyo, PMI-na wuxuu ka kacay bishii hore. Bishii Abriil, waxsoosaarka yurubiyanka PMI wuxuu kordhay 1.3 boqolkiiba dhibcihii bishii hore ilaa 60.8%, taas oo ahayd bil-bil-kordhin seddex bilood oo isku xigta, taasoo muujineysa in heerka kobaca warshadaha waxsoosaarka yurub uu sii waday inuu xawaareysto marka loo eego bishii hore. , iyo dhaqaalaha yurubiyanka wali wuxuu hayaa isbeddel xoog leh oo soo kabasho ah. Marka laga eego aragtida waddamada waaweyn, waxsoosaarka PMI ee Boqortooyada Ingiriiska, Talyaaniga, iyo Isbaanishka ayaa kordhay marka loo eego bishii ka horreysay, halka soosaarka PMI ee Jarmalka iyo Faransiiska wax yar ka saxay marka loo barbar dhigo bishii ka horraysay, laakiin waxay ku sii socotaa heer sare ah. Bartamihii bishii Abriil, kororka ballaaran ee kiisaska la xaqiijiyay ee oof-wareenka cusub ee wadammada sida Jarmalka, Talyaaniga iyo Iswiidhan waxay keeneen caqabado hor leh oo soo kabashada dhaqaalaha Yurub. Iyadoo la tixgelinayo in dib u soo noqoshada cudurka cusub ee taajku uu horseedi karo dib u dhac kale oo ku yimaada kobaca dhaqaalaha Yurub, Bangiga Dhexe ee Yurub ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu sii wadi doono inuu ilaaliyo siyaasad lacageed oo xad dhaaf ah isla markaana uu sii wadi doono xawaaraha iibsiga deynta.
Tan afraad, heerka kobaca warshadaha wax soo saarka ee Ameerika ayaa hoos u dhacay, PMI-na wuxuu ku laabtay heer sare. Bishii Abriil, waxsoosaarka Mareykanka ee PMI wuxuu ahaa 59.2%, hoos udhaca 3.1 boqolkiiba dhibcaha bishii hore, taasoo soo afjaraysa sii socoshada joogtada ah ee laba bilood oo isku xigta, taasoo muujineysa in heerka kobaca warshadaha wax soo saarka Mareykanka uu hoos u dhacay marka loo eego bishii hore. , iyo tilmaamku wali wuu ka sarreeyaa 59%, oo tilmaamaya Dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha Mareykanka wali wey xoog badan tahay. Wadamada waaweyn dhexdooda, heerka kobaca ee warshadaha wax soo saarka Mareykanka aad ayuu hoos ugu dhacay, PMI-na wuxuu ku laabtay heerar sare. Warbixinta ISM waxay muujineysaa in PMI-da waxsoosaarka waxsoosaarka Mareykanka ay hoos ugu dhacday 4 boqolkiiba dhibcihii bishii hore illaa 60.7%. Heerka kobaca ee wax soo saarka, baahida iyo waxqabadyada shaqaalaynta dhammaantood way ka gaabiyeen bishii hore, iyo tusmooyinka la xiriira ayaa hoos u dhacay marka loo eego bishii ka horraysay, laakiin waxay ku sugnaayeen heer aad u sarreeya. Waxay muujineysaa in heerka kobaca ee wax soo saarka Mareykanka uu hoos u dhacay, laakiin waxay haysaa isbeddel soo kabasho deg deg ah. Si loo sii wado xasilinta isbeddelka soo kabashada, Mareykanka wuxuu damacsan yahay inuu hagaajiyo diiradda miisaaniyadda oo uu kordhiyo kharashyada aan difaaca ahayn sida waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo cilmi baarista iyo horumarinta si loo xoojiyo guud ahaan xooggiisa dhaqaale. Guddoomiyaha Kaydka Federaalka wuxuu ku qanacsan yahay soo kabashada dhaqaale ee laga filayo Mareykanka, laakiin wuxuu kaloo carrabka ku adkeeyay in halista fayraska taajka cusubi wali jiro oo weli ay lagama maarmaan tahay taageerada siyaasadeed ee joogtada ah.